Ezempilo, Ukudla okunempilo
Imfucumfucu - iyisifo esivela kuzo zonke izilwane zasolwandle ezikhona. Ukwakhiwa kwama-shrimp kuhlanganisa izakhi ezigcotshwe kahle: i-thiamine, i-calcium, i-riboflavin, i-potassium, i-sodium, i-magnesium, insimbi, i-manganese, i-phosphorus, lokhu kuchaza izinzuzo zezinkumbi kubantu.
Iqukethe izinto eziwusizo ze-prawn, njenge-anti-sclerotic, ngcono i-blood coagulability nokunciphisa ingozi yamakhebhu egazi, ziyasiza ekukhuculeni i-anemia. Izinhlanzi eziningi zasolwandle, ngokungafani nemikhiqizo yezimfuyo ezivela emlonyeni, ekubunjweni kwayo kuneziqu eziyingqayizivele ze- polyunsaturated ezibizwa nge-omega-6, kanye ne-omega-3. Ukungena emzimbeni womuntu, benza umsebenzi ocacile: behlisa inani le-cholesterol eyingozi egazini. Ngaphezu kwalokho, i-omega-3 acids inomthelela wokulwa nokuvuvukala ngezifo eziningi: i-pneumonia, i-asthma, isifo samathambo - yilokho imfucuza yabantu ewusizo.
Yiziphi izinzuzo ze-shrimps ezinganeni, ukuthi zicebile kakhulu i-iodine futhi zinomthelela omuhle ekukhuleni okujwayelekile kwengane (ngokungafani nemikhiqizo e-iodized artificially - usawoti, isinkwa, ubisi - imfucumfucu iodine ayanyamalala emhlanganweni wokuqala kanye ne-oksijeni nokukhanya kwelanga ).
Futhi ema-shrimps kunezinhlobo eziningi ze-fluoride ne-calcium, ezithinta ukuvimbela isifo sezinsini namazinyo. Lawa amaminerali angumthombo wokwakha amathambo, ukukhula kanye nempilo yamazinyo, okuvimbela ukubukeka kwamathambo emazinyo, lapho amabhaktheriya amaningi e-pathogenic, ababhuli be-koqweqwe lwawo, abalala khona.
Futhi, imfucumfucu yomuntu iyasiza - iphrotheni ecebile kakhulu ku-taurine. Le kahle i-amino acid isondla imithwalo yegazi nemisipha, kuyilapho igcina ukuqina kwawo okuhle nezwi. Ngaphezu kwalokho, abakwa-pharmacy basebenzisa u-taurine ukwenza amaconsi ehlose okusiza ukuthuthukisa isimo sezinsizwa zamehlo, i-cornea ne-retina. Kodwa-ke, isaladi ye-shrimp iyamnandi nakakhulu kakhulu kunemithi ehlukile! I-Taurine, etholakala ekudleni kwezinhlanzi, ivumelanisa ngokuhambisana nokubunjwa kweziphuzo eziningi zamandla.
Ukwengeza, ama-shrimps avuselele ukuzivikela komzimba womuntu, inyama yabo ayinayo noma yimuphi umthelela onobungozi ukuthi ezinye izinhlobo zezinkukhu noma ezifuywayo zingase zibe nazo.
Kusuka emahlathini ungakwazi ukupheka izitsha ezihlukahlukene: amasaladi, isobho, ukudla okulula, izifundo zesibili. Ngakho-ke, yidla inyama enjalo ewusizo, okuyizinto eziwusizo ezibonakalayo.
Ama-Shrimp akuyona nje into engavamile engavamile futhi ewusizo kakhulu, nayo iphinde ikholori ephansi. Lokhu kuhlukanisa kahle ngokunye okunye okudla okunezici ezilandelwayo namavithamini futhi kwenza kube lula ukuwasebenzisa ngokudla ngesikhathi sokudla okuningi. Ngakho-ke ungacabangi ukuthi ama-shrimps ayasiza yini - faka nje ekudleni kwakho.
Amagremu ayi-100 ama-shrimps ahlanzekile angasetshenziselwa ukushisa afakwe ku-73 kuya ku-107 kcal, kuye ngezinhlobo zezilwane. Cishe esifundeni esifanayo kukhona ubhanana, amazambane, i- peas eluhlaza, i- flounder, i-crucian carp, i-telopia, i-pike, i-hake nezinye izinhlanzi ezinamafutha aphansi. Kulokhu, i-caloric kakhulu ayiyona enkulu kunazo zonke, kodwa, ngokuphambene nalokho, ama-subspecies amancane kakhulu ama-shrimp. Zinezibalo eziningi kakhulu zento ewusizo kakhulu.
Amakholori amancane ama-shrimps angachazwa ngokuntuleka okuphelele kwe-carbohydrate. Kodwa-ke, kunezinhlobo zamaprotheni amaningi kulawa ma-crustaceans. Bakha amaphesenti angama-20% esisindo sezinhlanzi. Okunye kobuningi kuthathwa ngamanzi, kanye namaminerali awusizo namavithamini. Babala cishe ngo-78%. Ngakho-ke, isibonelo, ama-shrimps abhekwa njengumthombo we-vitamin A (retinol), i-vitamin D. Eminye ewusizo kakhulu ama-shrips kubantu-aqukethe i-riboflavin (noma i-vitamin B2), edlala indima enkulu ekusebenzeni okuhle kwe-circulatory system ne-gland yegciwane, kanye ne-folic I-Acid, ebaluleke kakhulu kubantwana nabesifazane abakhulelwe.
Ipiramidi yokudla - isisekelo sokudla okunempilo nsuku zonke
I-Meltwater nezindawo zayo
Isipho semvelo. Ikhasi - lizuze futhi lilimaze
Inkinga yekhulu: yikuphi ukudla okunciphisa i-cholesterol?
Ukuqhathaniswa kwe-carbon esebenzayo nemiphumela yaso emibi
Motor inverter okwesikhathi esiqandisini
I engavamile kakhulu umbala. Igama imibala engavamile, isithombe. I engavamile kakhulu umbala wamehlo
Amadivaysi ezenzelwe ukwakheka: imidwebo
Kolwelwesi: i exacerbation, izimpawu, ukwelashwa
Cool uhlamvu - umlingisi engcono! "Iron Man 2": nabalingisi, izinhlamvu, indaba yokudalwa
Thrush: izimpawu, izimbangela, ukwelashwa kanye nokuvimbela
Ocushiwe carbon ibele: ukusetshenziswa ethile, umthamo kanye izeluleko kongoti
Kanjani ukufundisa upholi ukuze izandla zakho: indlela elingenazinkinga
Yaseshashalazini Okudumile e Moscow enkabeni yedolobha